Deg deg: Halkee ku sugan yahay Cabdi Maxamuud Cumar iyo waxa lagu haysto oo la ogaadey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Deg deg: Halkee ku sugan yahay Cabdi Maxamuud Cumar iyo waxa lagu haysto oo la ogaadey
Halkee ku sugan yahay Cabdi Maxamuud Cumar iyo waxa lagu haysto oo la ogaadey. Waxaan la soconay in saaka ciidanka dawlada dhexe ee Itoobiya ay galeen madaxtooyada Jigjiga qabteena madaxii ismaamulka Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubno sarsare oo ka tirsan maamulkiisa.
Hadaba waxa la ogaadey sababtii keentay qalalaasaha ku yimi noloshii dadka magaalada Jigjiga oo dhalinyar raacsan Cabdi Maxamuud Cumar ka bilaabeen rabshado dhinacyo badana.
Madaxweynaha maamulka ayaa loo sheegay inuu ka soo qaybgalo shir sirdoon oo ka dhici lahaa Jimcihii shalay magaalada Addis ababa, dibna u dhigo shirka golihiisa barlamaan ee dhici lahaa maanta.
Waxana sirdoonka Ioobiya sheegeen inuu shirkaas diidey isla markaana ku hanjabay inuu ku dhawaaqi doono qodobka 39 ee dastuurka dalkaasi ee sheegaya in qoomiyad kastaa ka tashan karto aayaheeda ayadoo madax banaani raadsan karta.
Qodobkan 39 ayaa dood aad u dheer ka taagneyd Itoobiya ilaa iyo markii lagu daray dastuurkii dalka loo sameeyay sanadii 1991. Waxana diidanaa Axmaarada.
Qodobkan ayaa u fiicnaa Somalida ayadoo xilli kasta ku dhawaaqi kara in AFTI madaxbanaani laga qaado dadka deegaanka.
Shirka amniga ee dawlada dhexe ku baaqdey ayaa looga hadli lahaa dagaalada soo noqonoqaya ee ka dhaca xuduudaha qabiilada Somalida iyo Oromada iyo Oromada iyo kuwa kale.
Waxa warku intaas ku darayaa in ciidanka liyuu booliisku ay dileen askar ka tirsan dawlada dhexe xalay inkastoo tirada aan la sheegin, xireena isla ciidan ka tirsan iyaga oo diidey inay Cabdi Maxamuud Cumar amar ka qaataan.
Dhinaca kale dawlada dhexe ee Itoobiya ayaa sheegtay in bililiqada ay wadaan taageereyaasha Cabdi Maxamuud Cumar oo ay sheegeen in lagu hayo xarun ku taal Jigjiga.
Waxa dawlada dhexe sheegtay inay soo kordhinayso ciidanka jooga Jigjiga si amniga loo sugo. Xaaladan ayaan la garan Karin sida ay ku dhamaan doonto.
Abiy Axmed ayaa ku doodaya in uu burburayo amarka iyo kala dambeyntii ismaamulku. Si kastaba ha ahaatee talaabada uu qaaday ayaa walwal ku abuurtey aduunka su’aalna gelinaysa isbedelkiisa.
Waxayna sii xumaan doontaa haddii dad ku dhinto falka uu amrey in ciidan galo Jigjiga.